DFS oo Siyaasad adag ku joojineysa Heshiiskii Imaaraadka & Somaliland ee dekadda Berbera. – Xeernews24
DFS oo Siyaasad adag ku joojineysa Heshiiskii Imaaraadka & Somaliland ee dekadda Berbera.
3. April 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Guddoonka Baaralmaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Mooshin laga furayo Saldhigga Milateri ee dalka Imaaraadka Carabta ku yeelaneyso Magaalada Berbera.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa gabagabadii kulankii maanta ka sheegay in Arbacadda soo socota la furi doono mooshinka ku saabsan saldhigga milateri ee Berbera ay ku yeelaneyso Imaaraadka.
Mooshinkan oo dhowaan ay Guddoonka u gudbiyeen xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa ku saabsan in sharci darro iyo xadgudub madax bannaanida Soomaaliya loo aqoonsado saldhiga ay Imaaraadku dooneyso inay ku yeelato magaalada Berbera iyo heshiiska ay la gashay maamulka degaankaasi ee Somaliland.
Arrinta saldhigga Imaaraadka ayaa muran weyn ka dhalisay gudaha Somaliland iyo dowladda Federaalka, waxaana Imaaraadka Carabta ay noqotay dowlad dano badan ka leh Soomaaliya oo maamul goboleed kasta heshiis gaara la galeysa iyadoo jebineysa xeerarka caalamiga ah.
Waxaa jira warar kala duwan oo sheegaya in dowladii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh ay wax ka ogeyd heshiiska Berbera.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/shire.jpg 193 262 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-04-03 21:21:102017-04-03 21:21:10DFS oo Siyaasad adag ku joojineysa Heshiiskii Imaaraadka & Somaliland ee dekadda Berbera.
Ciida NIISTA ah ee la gurayo Dixda Bariisle ee gobolka salal! Turkiga oo Muqdisho ka dajiyay Gargaarkii Ugu badnaa.(sawiro)